Lab Zviridzwa, Hupenyu Sayenzi Equipment, Ice Machines - NANBEI
Imwe Girazi Reactor
Hombe Rotary Evaporator
Yakaderera Tembiricha Freezer
-40 Degree Yakaderera Tembiricha Freezer
-86 Dhigirii Ultra Yakaderera Temperature Freezer
-105 Dhigirii Ultra Yakaderera Temperature Freezer
-152 Degree Ultra Yakaderera Temperature Freezer
-164 Degree Ultra Yakaderera Temperature Freezer
2 kusvika ku8 Dhigirii Pharmacy Firiji
4 Dhigirii Kurapa Ropa Firiji
Kumba Kuomesa Dryer
Murabhoritari Inomisa Dryer
Magetsi Mvura Distiller
Liquid Nitrogen Tangi
Upenyu Sayenzi Zviridzwa
Ice Cube Mugadziri
Snowflake Ice Mugadziri
Mvura Jacket Incubator
Tester Kukora Kwepiritsi
Midziyo Yekuongorora Yenyama
Mvura Yekuedza Instrument
Yakanyungudutswa Oxygen Meter
Multiparameter Mvura Yakanaka Meter
NANBEI INSTRUMENT LIMITED yakabatana neNanbei International Group Limited. Yakatengeswa kunze kwenyika dzinopfuura zana nemakumi maviri pasirese kwemakore makumi maviri, uye ndeimwe yemakuru uye akazara chiridzwa uye vagadziri vemidziyo muChina.Iyo inobatanidza kutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kutengesa seimwe yeakazvimiririra yemutemo persified tekinoroji boka.NANBEI yakawana ISO9001:2015,SGS,TUV certification,uye zvigadzirwa zvedu zvine EU CE,RoHS neCNAS certification.
CE & ISO Hunhu Husimbiso
Isu tine international standard system certification
Iine simba rekusangana mutsara mashandiro anogona kuvimbisa kufambira mberi kweOEM
Nyanzvi R&D Chikwata
Kukwidziridzwa kwehunyanzvi uye shanduko yezvigadzirwa inoitwa gore rega rega, uye kunyanya kutariswa kunobhadharwa kune mushandisi kushandiswa uye hunyanzvi.
Zvese zvigadzirwa zvinovimbiswa mahara kwegore 1 kubva pazuva rekutengesa
Chaiyo-nguva yekupihwa kwezvikamu uye zvishongedzo kune zvese zvigadzirwa
Kudzidzira Mhiri kwemakungwa
Mushure mekutenga chigadzirwa, unogona kusarudza mainjiniya ehunyanzvi pa-saiti kudzidziswa
Kuti zvizadzise zvinodikanwa zvekuwedzera bhizinesi, zita rekambani rakashandurwa kuita NANBEI INSTRUMENT LIMITED.
Akahwina mubairo wemamiriyoni makumi maviri emayuan echirongwa chiri pasi peSINOMACH.
Nanbei Scientific Instrument (Beijing) Technology Co., Ltd. yakavambwa-yakazara, uye Nanbei Instrument yakaverengerwa seKirasi A mutero kwemakore akateedzana.
Zvigadzirwa zvakatengeswa kune dzinopfuura 100 nyika uye matunhu mhiri kwemakungwa.
Nzvimbo yekugadzira yakaendeswa kuQinyang Science uye Technology Park yeHenan Academy yeSainzi.
Gadzira hofisi yechipiri neyechitatu.Bata mukana we "One Belt One Road".
Yakapihwa "E-commerce Enterprise" neDhipatimendi reCommerce reHenan Province.
Yakavambwa Shanghai Zhenghong Industrial Co., Ltd., inodzorwa neNanbei Instrument.
Yakavambwa Nanbei International Group Co., Ltd. muHong Kong, inyanzvi mubhizimusi remhiri kwemakungwa.
Yakawana kubatirana pamwe neakawanda epamba uye ekunze mabhureki kubatsira kurongeka kwakarongwa kweNanbei chiridzwa brand.
Dhipatimendi rekunze nekunze rakavambwa, uye mhando yepasi rose yeNanbei Instrument (NANBEI) yakatumirwa zviri pamutemo kuUnited States, Europe, nezvimwewo, uye yakapasa CE, RoHS, SGS certification.
Supply murabhoritari zviridzwa kuedza rabhoritari muShanghai World Expo, uye asvika kushandirapamwe nemayunivhesiti akawanda epamba.
Kupinda e-e-commerce mapuratifomu epamba uye ekunze kuti ipe imwe-yekumira michina masevhisi.
Yaimbova "Zhengzhou Nanbei Instrument Equipment Co., Ltd."yakanyoreswa.
Kubatanidzwa mumunda wezviridzwa zvesainzi, midziyo yerabhoritari uye electromechanical michina, ichipa imwe-stop chiridzwa chekutenga masevhisi.
General chiridzwa chinoshandiswa kutsvagisa nerabhoritari
Kuongorora uye kuyedza chishandiso
Mhando dzese dzemicroscope murabhoritari
Chimbo chehupenyu sainzi uye yakashandiswa sainzi
Mhando dzeBhokisi reRabhoritari
Zvishandiso Zvokuedzwa Kwenyama
Mvura Yekuongorora Midziyo
Yakakura Pilot Yekuomesa Dryer
1L Laboratory Inomisa Dryer
1.8L Murabhoritari Inomisa Dryer
1.2L Murabhoritari Inomisa Dryer
Low tembiricha vacuum freeze dryer
2 kusvika ku8 madhigirii ekudzivirira mufiriji
JPSJ-605F Yakanyungudika Oxygen Meters
Maitiro ekuchenesa Ultra-yakaderera Temperature Firiji
Ultra-yakaderera tembiricha firiji, inozivikanwawo seyekupedzisira-yakaderera tembiricha firiji, yekupedzisira-yakaderera tembiricha yekuchengetedza bhokisi.Inogona kushandiswa kuchengetedza tuna, iyo yakaderera-tembiricha bvunzo yemagetsi zvishandiso, yakakosha ...
Rotary Evaporator Inoendeswa kuSudan Kuvakwa kweLabhoritari
Kuti vawedzere marabhoritari yavo, mutengi anobva kuSudan akatenga matatu anotenderera evaporator NBRE-3002, uye ane hukama anotsigira michina, kusanganisira matatu efiriji circulator, uye matatu vacuum pombi kubva comp...
Chengetedzo yeChitubu Tension & Compression Tester Shandisa
Chitubu chekunetsana uye compression yekuyedza muchina unogona kukamurwa kuita chitubu tension uye compression tester, zvizere otomatiki chitubu kushushikana uye compression tester uye microcomputer inodzora kushushikana kwechirimo ...
Professional chiridzwa mutengesi, zvigadzirwa zvakanakisa mukuita, nekukurumidza uye kufunga.Mushure mekutengesa sevhisi, mutengo weyakanyanya kukosha mari, inotumirwa kune dzimwe nyika.Isu tinoomerera kune mutemo wekuvandudza, hunyanzvi uye hunhu.
Nhamba 72, Beihuan Road, Jinshui District, Zhengzhou, Henan, China (Mainland)